Imiboniso - iZhejiang Chaolian Elektroniki Co, Ltd
Ikhaya > Iindaba > Umboniso
Umsebenzi wokubamba umbane
Kwinkqubo yamandla, inkqubo isebenza phantsi kwevolthi ebaliwe phantsi kweemeko eziqhelekileyo, kwaye ukuphambuka kwamandla ombane kuncinci kakhulu. Zonke izixhobo zombane zisebenza ngesiqhelo. Nangona kunjalo, xa inkqubo ibethwe ngumbane okanye ukungasebenzi kakuhle, inkqubo yombane iya kuphakama kakhulu, kwaye igridi yombane iya kuphuma kumbane oqhelekileyo kwangoko. Amaxesha aliqela okanye amaxesha amaninzi. Kule meko, ukufakwa kwazo zonke izixhobo zenkqubo akunakukwazi ukumelana, ukonakala okanye nokuba kwimeko yokulala, nje ukuba inkqubo ine-overvoltage, iya kuthi isebenze kwaye ingene kurhulumente osebenzayo, ngephanyazo izijike ibe ngumqhubi, ikhulule ombane aphezulu emhlabeni, kuthintela ukunyuka okuqhubekayo kwenkqubo yombane, kunye nokukhusela izixhobo kunye nokhuseleko lomntu.
Ukuhlelwa kwebhokisi yokuhambisa
Iibhokisi zokuhambisa ezisetyenziswa ngokuqhelekileyo zenziwe ngomthi nangentsimbi. Ngenxa yokuba iibhokisi zokuhambisa intsimbi zinenqanaba eliphezulu lokhuseleko, ezinyithi zisetyenziswa ngakumbi.
Zithini izibonelelo zeemodyuli zokumisa ngaphezulu kweepali zokumisa
Imodyuli yokwehlisa ngumzimba wokwenza umhlaba ubukhulu becala owenziwe ngezinto ezingezentsimbi. Yenziwe ngezinto ezingezizo zesinyithi ezinokuxhathisa okuphantsi kunye neepropathi ezinzileyo zeekhemikhali kunye ne-anti-corrosion yesinyithi.
Ukusilela okuqhelekileyo kwefayibha kunye nezisombululo zazo
Uyintoni umahluko phakathi kwefayibha ebonakalayo kunye nentambo yokubonakalayo